अर्काकी श्रीमती भगाएर ‘तेस्रो बिहे’ गर्ने वडाध्यक्षलाई किन कानुन लागेन ? – साँचो खबर
वडा अध्यक्षले तेस्रो विवाह गरेपछि ती महिलाको पहिलो श्रीमान् नोखिराम बोहरालाई जारीसँगै उनको ऋणसमेत तिरिदिने सहमति भएको छ । वडा अध्यक्षले ३ लाख ८० हजार जारी र ३ लाख ९५ हजार वोहराको ऋण तिरिदिने सहमति गरेका छन । स्थानीयका अनुसार बहुविवाह गर्ने वडा अध्यक्षलाई भने केही दिन अघिदेखि प्रहरीले सुरक्षा दिएर वडामा कामकाज गर्ने बाताबरणको निर्माण गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
वडा अध्यक्ष कुमाईको याे तेस्रो विवाह हो । उनीसँग विवाह गर्ने नयाँ महिला गौमती बाेहराका पहिलाे श्रीमान् पट्टि ५ बच्चाबच्ची र वडा अध्यक्षको पनि ४ बच्चाबच्ची रहेका छन् ।वडा अध्यक्ष कुमाइले भने गौमतीको श्रीमान नोखिराम बाेहराले घरबाट निकालिदिएपछि मर्ने डरले आफुले विवाह गरेको जनाउँदै आएका छन् । योसहित अब अध्यक्षको अवैध ३ वटा श्रीमति भएका छन् । पीडित नोखिरामले न्यायको लागि भौतारिए पनि न्याय नपाउने उपाय देखेपछि उनले मिल्न बाध्य भएको गुनासो गरेका छन् ।
Previous: दुनियाकै दयालु मान्छे ! ७ डलरको बियर किनेर ३ हजार डलर टिप्स
Next: हिउँ पग्लिएपछि ६ हजार वर्ष पुराना दर्जनौं बाणहरु भेटिए